Home » အသားပေး » အလန် Alda အဆိုပါ 2019 #NABShow ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Service ကိုဆုချီးမြှင့်လက်ခံမှ
အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန် ပယ်အပေါ်ကန်ဘော တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8th နှင့်ရန်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Service ကိုဆုချီးမြှင့်၏တင်ဆက်မှုမည်ဖြစ်သည် အလန် Alda နှင့်အားဖြင့်စက်မှုလိပ်စာ၏ဖွင့်ပွဲ Keynote နှင့်ပြည်နယ် ဂေါ်ဒွန်စမစ်, လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်စီအီးအို။ ပင်မအဆင့်အပေါ်အားလုံး-တံဆိပ်ကို Access ကိုအတူအားလုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးတက်ရောက်ဖို့ပွင့်လင်း။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆိုပါ NAB စက်မှုလုပ်ငန်းမှသိသိသာသာများနှင့်ကြာရှည်ခံအလှူငွေရာ၌ခန့်ထားပြီသူထုတ်လွှင့်အသိုင်းအဝုိင်း၏အင်္ဂါအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ယခင်ဆုလက်ခံသူ၏ရှည်လျားသောစာရင်းအခြားသူတွေအကြားရော်ဘင် Roberts သည်, ဘော့ Schieffer မိုက်ကယ်ဂျေ Fox က, မာရိ Tyler Moore ကသမ္မတ Ronald ရေဂင်, အက်ဒွပ် R. Murrow, ဘော့မျှော်လင့်ချက်, Walter Cronkite နှင့် Oprah Winfrey, ပါဝင်သည်။
Alda အကောင်းဆုံး hit ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး 1972 အတွက်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးနှင့် 11 ရာသီအဘို့အထဲသို့ပြေး ဝင်. ဖြစ်သော "က M * တစ် * S ကို * H ကို" အတွက်ဒေါက်တာ Hawkeye ပီယပ်အဖြစ်သူ၏သရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်လူသိများသည်။ "M က * တစ် * S ကို * H ကို" ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလအတွင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာသဒရာမာ, 1996 အတွက် Fame ၏ NAB အသံလွှင့်ခန်းမသို့မဝငျခဲ့သည်။ Alda, စီးရီးအတွက်သရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ဍကစားခြင်းအပြင်လည်းညွှန်ကြားထားနှင့် 1983 အတွက်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်-အရှည်နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ Co-ရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါပြပွဲနေဆဲ US မှာအများဆုံး-watched အစီအစဉ်များထိပ်-တစ်ဆယ်စာရင်းထဲတွင်အဆင့်နှင့်တူညီစီးရီးများအတွက်သူဟာ Emmy directing နှင့်ရေးသားခြင်း, Alda သရုပ်ဆောင်အနိုင်ရဖို့အတွက်သာလူတစ်ဦးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
NAB ပြရန် ရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့အလုံးစုံအတွေ့အကြုံများထွက်ပတ်လည်၌သငျတို့သညီလာခံအစည်းအဝေးများနှင့်ဇာတ်စင်တင်ပြချက်များစဉ်အတွင်းအဆိုပါ Show ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်သိမွငျကွားလတံ့သောအရာကိုအပေါ်တည်ဆောက်ရန်သော့ချက်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်သွက်ဆွေးနွေးမှုဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအထူးဖြစ်ရပ်များပါဝင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီနေရာကို go: registration.experientevent.com/ShowNAB191/Flow/ATT/?tracking=WB11&_ga=2.113198532.1124917358.1548179947-1584449449.1548179947#/registrant//CustomLogin/
NAB ပြရန်, ကျင်းပဧပြီလ 6th-11th, Las Vegas မှာ 2019, ဖန်တီး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အားလုံးပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာပေးပို့ဖုံးအုပ်ထားသည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ 103,000 နိုင်ငံများနှင့် 166 + ပြသခဲ့သည်ထံမှ 1,700 တက်ရောက်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အဆုံးစွန်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း မှစ. စားသုံးမှုရန်, မျိုးစုံပလက်ဖောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမျိုးများကိုဖြတ်ပြီး, 2019 #NABShow ရိုးရာအသံလွှင့်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအသစ်ဖန်သားပြင်မှအကြောင်းအရာများပေးပို့လက်ခံသောဖြေရှင်းချက်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-01-22
ယခင်: GatesAir သြစတြေးလျရဲ့ကို့အပေါ်ဒီဗွီဘီ-T2 ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများအတွက် Maxiva ™ XTE စိတ်လှုပ်ရှားထောက်ပံ့
နောက်တစ်ခု: NHL Net ကအတွက် DoCaption LRBox အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးမှာ Data ပလက်ဖောင်း Scoreboard ဒေတာများကိုကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများနှင့် OSD နှင့်အတူဆွတ်ခူး